Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa u diraya hambalyo ku aadan Ciidul Fidriga dhamaan Muslimiinta Caalamka., | RBC Radio	Home
Sunday, August 26th, 2012 at 02:25 am	/ 6 Comments Saturday, August 18th, 2012 at 07:42 pm Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa u diraya hambalyo ku aadan Ciidul Fidriga dhamaan Muslimiinta Caalamka.,
Muqdisho, 18, Agust. 2012…..Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Dr. Cabdi Weli Maxamed Cali ayaa caawa dhamaan muslimiinta Caalamka iyo shacabka Soomaaliyeed Hawada u marinaya hambalyo ku aadan farxada Ciidul Fitriga.
Ra’isul wasaaruhu wuxuu Hambalyo u diryaa dhamaanUmadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan, isagoona sheegay in Umadd kasta ay leedahay Ciid iyo munaasabado ay weeyneeyaan, hase yeeshee Ilaahay SWT waxaa uu Umaadda Islaamka u jideeyey laba Ciidood oo kala ah Ciidul Fitri iyo Ciida udxiyada, Muslimiinta meel kasta oo ay joogaan waa u dabaal dagaan labadaas Ciidood.
“Anigoo ka fa’iidaysanaya fursadaan Ciida waxaa ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed inay is cafiyaan isu tanaasulaan isna caawiyaan, waa in kuwa wax haysta ay farxada la qaybsadaan walaalahooda dhibaateysan ee aan waxba haysan.waxaa kaloo farxad ah in Ciidan ku soo begantay anagoo rajo wanaagsan ka qabna inaan maalmaha soo socda Soomaaliya yeelato dowladd rasmi ah taasina waxay noo tahay farxad labaad”.
Ugu dambeyntii Ra’iisul Wasaaruhu Isagoo hadlkiisa soo gabagabaynaya waxaa uu sheegay inuu u rajaynayo shacabka Soomaaliyeed barwaaqo iyo horumar laga gaaro siyaasada , dhaqaale iyo Arrimaha bulshada, ilaahayna sanadkaan sanadkiisa ku gaarsiiyo nabad iyo baraare. >>>>>Dhamaad<<<<
Mogadishu, Somalia 1 Response for “Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa u diraya hambalyo ku aadan Ciidul Fidriga dhamaan Muslimiinta Caalamka.,”
wadani ah muwadin says:	August 18, 2012 at 10:03 pm	gaas waan kaa qaadabay laakin xisaabtii lasheegay wali waa sideedii sababtaasi maxaytahay?